Nagarik News - काठमान्डूप्रति
११ असोज, २०७१
काठमान्डू छिरेपछि स्वयं काठमान्डू बन्न खोज्छ मान्छे।
चोभार थुनेर पौडिन खोज्छ, सक्तैन
महाराज बन्न खोज्छ, बन्दैन
आफूले थेगेको आकाश हेर्छ, जमिन हेर्दैन
विक्षिप्त हुन्छ र काठमान्डूको नाकैमा उभिएर गर्छ सत्तोसराप।
आफ्नो उचाइ नाप्छ धराहरास"ग
रानीपोखरीमा पहिचानको गहिराइ खोज्छ
यहा"का सा"घुरा गल्लीभन्दा असरल्ल
आफ्नै सपनाका खो"चमा चेपिएपछि
तथानाम गाली गर्छ।
गाली गर्ने देखेर लाग्छ, काठमान्डू एउटा कुख्यात अपराधी हो?
आफ्नै स्वाभिमानले उ"चो बा"चेको यसले
न कसैलाई बोलाउ"छ, न त किन आयौ भनेरै सोध्छ
न कसैलाई घोक्र्या उ"छ,
न माग्छ कसैस"ग भिख,
न रुन्छ कसैको काखमा घोप्टो परेर?
गाली गर्नेहरूको केवल एउटै ध्याउन्न हुन्छ
पशुपतिकै आशीर्वादले सिंगो काठमान्डू बन्ने
स्वयम्भूका आ"खाभित्र काठमान्डू देखिने
आफू दरबार उभिने
सिंहदरबार हुने र सलाम खाने।
टाउकोमा मुड्कीले ठोके पनि चुप लाग्छ
घनले फुटाउन खोजे पनि बज्र बन्छ
काखैमा कुल्चि"दा पनि सहिरहन्छ।
काठमान्डूले अब त आ"खा खोले हुने!
उन्मत्त भैरवलाई नचाएर
कलिलाई जमिनबाट तत्काल निकालेर
हजार मन्दिरबाट देवदेवीलाई खुल्ला मैदानमा डाकेर
काठमान्डूले अकाट्य प्रतिउत्तर बोले हुने!
गालीले भत्किँदैन काठमान्डू
काठमान्डू भत्किन भत्किनुपर्छ नव–काठमान्डू।
पराजित ठान्नेहरूले बुझून्!
काठमान्डूको काँध चढ्दैमा काठमान्डू बन्न सक्तैन मान्छे।
जीवन भोगाइका अनेक पाटोसित गाँसिएका अनुभूति सम्झन्छु। जेष्ठ नागरिक चेतका चमकझैं लाग्न थाल्छन्, ती अनुभूतिहरू। लाग्छ— चेतका चमक चम्कँदा ती र त्यस्तै विगतका कुरा आगतमा फुरिन्दा रहेछन्। बाल्यकालदेखिका त्यस्ता सम्झना...
मर्दि हिमालको गोरेटोमा
डाँडापाखातिर डुलिराख्ने भएकाले शुभेच्छुकहरु मलाई सोध्छन्, 'लौन टे्रकिङ जानु पर्योब, कता जाने होला?' नयाँ पदयात्रीलाई 'घान्द्रुक–घोडेपानी' उपयुक्त छ भन्ने गरेको थिएँ। अचेल अर्को नाम पनि लिन थालेको छु, 'मर्दि हिमाल...
पापड बेल्नु त यसरी
संविधान जारी भएपछि एकाएक नाकाबन्दीले मन भरङ्ग थियो। त्यही बेला युरोपको सानो र सुन्दर सहर लक्जम्बर्गको केही दिनको यात्रा अवसर मिल्यो। केही दिनमात्र भए पनि मन फराकिलो होला भन्ने लाग्यो।